Yintoni ekungafanelekanga ukuba uMhambi anxibe uMtshato? - Umtshato Wokuziphatha
Oko kunxitywa lundwendwe okanye akufuneki ukuba kunxitywe emtshatweni kubonakala kucacile, kodwa abanye abantu abayifanisi imfashini. Ngapha koko, ezinye iindwendwe zomtshato zisenokudideka malunga nokudibanisa iimpahla ezifanelekileyo zomtshato. Iingcebiso ezimbalwa okanye izikhokelo malunga nokuba undwendwe lomtshato lunxibe ntoni kunokuba luncedo.
ungasusa njani amabala amadala kwiimpahla ezimhlophe
Izikhokelo zeZinxibo zeNdwendwe zoMtshato
Ukufunda imigaqo ngokubanzi yesithupha yindlela elungileyo yokuqala ukukhetha isinxibo kuwo nawuphi na umtshato, nokuba useburhulumenteni. Imithetho yokuziphatha kwabamenywa emtshatweni yokunxiba iya kwahluka ngokuxhomekeka kumtshato kunye nobume bomtshato, kodwa umthetho omnye uhlala unjalo kuwo nawuphi na umtshato: sukuphakamisa umtshakazi okanye umyeni. Ngokubanzi, abasetyhini akufuneki bakhethe iilokhwe ezinkulu zebhola ezihonjiswe ngeentsiba, ii-sequins ezinkulu, okanye zinxibe i-tiara. Amadoda afanele atsibe umnqwazi ongaphezulu, imisila, okanye isincedisi senduku.
Igalari yempahla yeendwendwe zomtshato zasehlotyeni
Iingubo zoMama woMtshakazi okanye uMyeni
Imisebenzi yokwamkelwa koMtshato
Izinto ongazenziyo ekucwangciseni iimpahla zomtshato zinokudideka, ke sebenzisa ingqiqo ukufumana eyona mpahla ifanelekileyo kwimitshato ezayo.
Undwendwe lutsala iDos
Into yokuqala ekufuneka yenziwe ngabasetyhini kukufumanisa ukuba yintoni Izitayile ziyayicenga imeko yomzimba wakho . Khangela iilokhwe kunye neeseti zesiketi ezineempawu eziza kukhulisa umzimba wakho. Amadoda kufuneka aqinisekise ukuba iibhulukhwe zawo zenzelwe ubude obufanelekileyo kwaye iibhatyi zilingene emagxeni nasemzimbeni wonke. Nxiba iimpahla imibala ebonakala intle ngebala lakho, iinwele kunye nombala wamehlo. Ukuba bafuna, izibini kunye neentsapho zinokwenza iimpahla ezilungelelaniswe ngombala; umzekelo, unxibe zonke iipastile okanye imibala yeetoni zejewel. Lumka nje ungadluli ngokuhambelana ngokuthe ngqo.
Okokugqibela, khumbula ukunxiba izixhobo ezifanelekileyo. Abafazi ngokuqinisekileyo banokuphatha ibhegi encinci okanye ephakathi, kodwa kufuneka bakuphephe ukuhambisa umthwalo omkhulu ngaphandle kokuba banabantwana abancinci ukuba babakhathalele. Madoda, shiyani iminqwazi neminqwazi ekhaya. Ngaba unxibe iwotshi ukuba unengxaki yokugcina umkhondo wokuba umtshato uqala nini. Ewe unxibe izihlangu ezikhululekileyo ukunqanda iintlungu ezinyaweni nasemlenzeni ekupheleni kosuku.
Nangona kuya kufuneka unxibe kwiindlela ezithandekayo nezintofontofo, kunokuba nzima ukuba ungathathi kude kude neengcinga. Jonga ukuba impahla oceba ukuyinxiba iyayiphepha le mpahla iqhelekileyo:
Musa ukunxiba iibhulukhwe ezimfutshane. Ngaphandle kokuba umtshakazi nomyeni bakuxelele ngokungqalileyo ukuba uza kunxiba ntoni emtshatweni wolwandle kwaye kubandakanya iibhulukhwe ezimfutshane, akufuneki unxibe iibhulukhwe ezimfutshane ukuya emtshatweni oqhelekileyo. Ungasoloko ufumana ingubo yelinen engasindi okanye iiblukhwe oza kuzinxiba ngosuku olukhulu. Ukuphela kwento eyahlukileyo kulo mthetho iya kuba yeyabantwana abancinci abaya kuthi bangalawuleki xa bengonwabanga okanye beshushu kakhulu.
Musa ukunxiba iimpahla eziveza umzimba. Usenokuba usebenze nzima kwabo bangabikho okanye unemilenze emihle, kodwa ngoku ayiloxesha lokubonisa. Amadoda anganxiba iibhulukhwe ezifanelekileyo kunye neehempe kodwa akufuneki anxibe iimpahla zokudinwa okanye iintloko ezingenamikhono. Abasetyhini kufuneka bakhathalele ukuba iintloko zabo azikho phantsi kakhulu, iziketi zabo azikho phezulu kakhulu, kwaye nelokhwe leyo ayixinene kakhulu. Ukuba awukwazi ukuhlala okanye ukugoba ngaphandle kokulungisa iimpahla zakho, kusenokwenzeka ukuba kutyhila kakhulu.
Musa ukunxiba ijini. Ngaphandle kokuba uzokuzimasa umtshato wasentshona, kungcono ushiye ijini ngasemva kwimpelaveki. Iibhulukhwe zokunxiba ziza kuluhlu lweentlobo zamadoda nabasetyhini, kubandakanya nokusikwa kwesitayile se-denim. Iimpahla zinokuhlala kamnandi kwaye zodidi.
Sukucinga ngokusesikweni. Ngelixa ujonge indawo yesimemo somtshato kunokukukhombisa ukuba umtshato uzakuba semthethweni kangakanani, unokuba uphosakele. Ukuba awuqinisekanga nokuba kufanelekile ukuba unxibe ilokhwe ye-cocktail okanye i-sundress okanye i-polo kunye ne-dress slacks okanye i-tuxedo epheleleyo, tsalela elinye lamalungu eqela lomtshato ukuba ufumanise.
Indlela elungileyo yokufumanisa ukuba undwendwe akufuneki lunxibe ntoni emtshatweni kukucinga ngento ongayi kuyinxiba kweminye imisebenzi esesikweni ebomini bakho. Umzekelo, ukuba awuzukunxiba Nxiba ecaweni , musa ukuyinxiba emtshatweni, nokuba.
Yintoni emelwe kukundwendwela uMtshato: Imibala
Ukunxiba imibalauyayithanda kwaye uyayicenga into ekufuneka yenziwe ziindwendwe zonke. Nangona kunjalo, kukho imibala embalwa engathandabuzekiyo xa kufikwa kwisinxibo somtshato weendwendwe.
Umbala ocacileyo umhlophe gca. Ingubo emhlophe emhlophe okanye umphezulu omhlophe kunye nesiketi azamkelekanga ngokubanzi, ngakumbi nangasiphi na isitayile esisemthethweni. Gwema indlovu, i-off-white kunye ne-beige elula, nayo. Nangona kunjalo, kulungile ukunxiba impahla enepatheni equka eminye imibala kunye nomhlophe.
Imibala yomtshato ayisiyomida, nokuba yeyiphi. Abasetyhini kufuneka bakhathalele ukuba abanxibanga ilokhwe enokuthi iphindwe kabini njengengubo yomtshakazi, ngelixa amadoda kufuneka ephephe ivesti enemibala okanye ikhephu kwimibala yomtshato. Nangona kunjalo, ilokhwe enxibe ijezi kwimibala yomtshato ilungile ukuba iindwendwe zabasetyhini zinxibe, njengeqhosha phantsi lehempe kunye neqhina elinemigca yamadoda.
Isiko lithi iindwendwe akufuneki zinxibe mnyama emtshatweni. Nangona kunjalo, umnyama ngokukhawuleza uba yinto ethandwayo yombala womtshato. Akusekho mda kumaqela abatshatileyo okanye iindwendwe ukwenza umbala wazo omnyama ube mnyama. Ngaphandle kokuba uyazi ukuba umtshakazi okanye umyeni uneemvakalelo ezomeleleyo malunga nesinxibo esimnyama, zive ukhululekile ukukhetha indibano emnyama emnyama oza kuyinxiba ngokusesikweni.umtshato wangokuhlwa. Tsiba unxibe mnyama ngaphandle kwangaphandleumtshato wasentwasahlobo okanye wehlobo, njengoko inokubonakala ngaphandle kwendawo, ungasathethi ke ngokutsala ubushushu obungakumbi.
Eyona ndlela yokuphepha ukunxiba into ongayifanelanga kukuba unxibe kakuhle kunokuba ubucwangcisile. Ukuba awukwazi ukuqonda iimpahla ezifanelekileyo, thatha nantoni na obuyicwangcisile ukuba uyokungena kwaye uya kulungelana nezinye iindwendwe zomtshato.
indlela yokubhala intetho yokuthweswa izidanga kwisikolo esiphakamileyo
Seaworld Park And Entertainment Ikhowudi Yewebhu Umbala Wenwle Utywala Ulutha Umtshato Wokubonisa
ubunzima bomndilili abaneminyaka eli-14 ubudala
Ngaba iilibra kunye neleos ziyavana
Iitatto zootatomkhulu noomakhulu abaswelekileyo
Umnyango wangaphambili we-feng shui ujonge ngasentshona
injani iwayini emhlophe
uyicoca njani ityali yoboya